ko htike's prosaic collection: မွန်အမျိုးသားနေ့ အငြိမ့်ပွဲ
မွန်အမျိုးသားနေ့အတွက် လန်ဒန်မှာ ကသွားတဲ့ အငြိမ့်ပွဲရဲ့ အခန်း တစ်ခန်းကို အားလုံး ကြည့်ရအောင် ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်ညွန်းဆရာက တော်သလို ကပြတဲ့ လူတွေကလည်း ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဆိုပေမယ့် အနုပညာ မြောက်အောင် ကပြသွားတာမို့ အပျော်တမ်း အငြိမ့်ကတယ်ဆိုတာထက် အနုပညာ မြောက်လက်ရာ တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 18:25
Happy to seen this , missing my country too much when can we can get democracy ????? right now all people have too much burden for daily life as well.
9 March 2008 at 06:51
thank you for this scene. although i couldn't go and watch this show, i enjoy it.
色情遊戲女優王國SEXSEX女優王國SEX 女優王國18女優王國AV女優王國女優報報AV女優報報無碼女優日本AV女優色情小遊戲麗的色情小遊戲色情遊戲色情小遊戲免費色情遊戲線上色情遊戲色情遊戲下載色情 遊戲色情遊戲區色情遊戲網成人色情遊戲都會男女視訊聊天室遊戲天堂遊戲天堂網et正妹牆無名et正妹牆辣妹交友網成人聊天視訊網情人視訊高雄網情人視訊 高雄網免費視訊聊天區et正妹牆 免費交友et正妹牆 貼圖區et正妹牆 本土自拍視訊聊天室入口激情挑逗聊天室視訊聊天頻道視訊聊天都會男女聊天網免費觀看視訊辣妹脫衣秀限制級a片情色電影院美女短片免費看限制級影片自拍情色影片下載18禁成人影音線上視訊聊天網辣妹視訊聊天網限制級電影即時通視訊大奶美女視訊本土辣妹視訊即時通成人視訊成人視訊交友聊天視訊錄影美女視訊聊天室免費辣妹視訊聊天網網友情聊天室上班族偷情聊天室已婚上班族聊天室080心悸動聊天室美眉影音視訊聊天室夜未眠成人影城18成人免費下載成人短片免費真人視訊辣妹一對多視訊聊天即時視訊聊天網路視訊聊天臺灣18歲成人小弟弟成人娛樂小潘潘成人無碼片夜激情成人聊天室免費視訊美女網成人愛情交易所線上交友網百分百成人圖日本av女優影片無碼av女優女優寫真av女優介紹sex女優王國